Hiiraan: Shuban biyood ka dilaacay Beledweyne - Radio Ergo
Hiiraan: Shuban biyood ka dilaacay Beledweyne
in Arrimaha Bulshada, Caafimaadka, Wararkii u Danbeeyay
Shuban biyood ka dilaacay degmada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo ritay todobaatan iyo kow bukaan toddobaadkii ugu dambeeyay. Shubanka oo u eg in uu deg deg ku faafayo ayaa degmada ka dilaacay labo toddobaad kahor. Lix iyo lixdan ka mid ah bukaanada uu soo ritay cudurka waa carruur da’doodu ka yar tahay shan sanno.
Waxaa bukaanada hadda loo wareejiyay xarun cusub oo laga hirgeliyay duleedka magaalada, taas oo lagu doonayo in lagu xakameeyo shubanka oo laga cabsi qabo in uu yahay daacuun. Xarunta cusub ayaa ku taal deegaanka Ceel-Jaalle oo hadda deegaan aan rasmi ahayn u ah dadka soo barakacay. Waxaa xarunta cusub ka howlgalaya labo iyo toban dhakhtar iyo labaatan kalkaaliye. Hay’adda caalamiga ah ee Badbaada Carruurta ayaa taageereysa howlaha caafimaadka ee xarunta. Laakiin waxaa shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay oo ay ka mid tahay Hubaal ayaa sidoo kale daawo ugu deeqay xarunta cusub.
Si kastaba, weli lama hayo tirada rasmiga ah ee bukaanada uu soo ritay cudurka maadaama dad badan ku tiirsan yihiin xarumo caafimaad oo gaar ah, farmashiyeyaasha halka kuwa kalena laga yaabo in guryaha lagu daweynayo, sida uu Raadiyow Ergo u sheegay Dhakhtar Cabdixaliim Maxamed Cabdulaahi, agaasime xigeenka isbitaalka guud ee Baledweyne.
”Maalin walba maalinta ka danbeeyso waxaa kordhaya dadka imaanaya xarunta. Maanta waxaa yimid 35 qof oo cusub marka waxaa dareemeysa inay aad usii kordhayaa dadka uu shubanku soo ridanayo maalinba maalinta ka danbeeyso,” ayuu yiri Dhakhtar Cabdixaliim.
Hodan Maxamed Aadan waxa ay habeen iyo maalin dul-fadhidaa wiil iyo gabadh ay dhashay oo ka mid ah bukaanada shuban biyoodka ee laga soo wareejiyay isbitaalka guud ee degmada oo hadda lagu daweeyo xarunta cusub ee Ceeljaale. “Waxaan isbitaalka ula soo cararay 3:00 am habeenkii 25 Janaayo kadib markii uu shubanka kusoo booday. Weli way ku jiraan, laakiin caafimaadkoodu wuu soo hagaagayaa wixii ka dambeeyay marka aan halkan keenay,” ayay Hodan oo la hadashay Raadiyow Ergo.
Weli baaritaan baa socda, laakiin agaasime xigeenka isbitaalka Guud ee Baledweyne dhakhtar Cabdixaliim Maxamed Cabdulaahi wuxuu sheegay in shubanka la la xiriirinayo cibitaanka biyaha wasaqeysan ee webiga Shabelle. Wuxuu intaa ku daray in bukaanada ugu badan laga keenay xeryaha dadka barakacay iyo tuulooyinka halkaas oo ay adag tahay in dadku helaan biyo nadiif ah.
Beelo Cabdinuur Aadan oo ah hooyada todobo caruur ah waxay isbitaalka kula jirtaa labo ka mid ah ubadkeeda. Waxay Raadiyow Ergo u sheegtay in qoyskeedu ku tiirsan yahay biyaha webiga oo ah waxa keliya ee ay heli karaan. ”Biyaha wabiga ayaan istcmaalnaa. Gabadh ayuu shubanka kusoo booday markii hore kadib isbitaalka ayaa geeyay oo faleembo ayaa lagu xiray, waana la siiyay daawo,” ayay sheegtay Beelo. Waxay intaa ku dartay in wax yar kadib markii ay kusoo noqotay guriga, ayuu shubanku haddana soo ritay wiilkeeda. Labada waxaa hadda lagu daryeelayaa xarunta cusub ee bukaanada shubanka oo ku taal deegaanka Ceeljaale ee duleedka magaalada Baledweyne.
Dhakhtar Qorane Maxamuud oo wasaarada caafimaadka ee Hirshabeelle u qaabilsan degmada Baledweyne ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in sideed qof u geeriyootay shuban-biyoodka. Lix qof waxay ku geeriyootay isbitaalka guud ee degmada, halka labada qof ee kalena ku dhinteen xarunta cusub ee bukaanada shuban biyoodka ee Ceel-jaale. Weli waxaa socda baaritaanka lagu hubiyo tuhunka la xiriira daacuunka.
Sool: Qodista ciida dhismaha oo dhibaato u keentay Beeraleyda iyo Xoolo dhaqatada
Galgaduud: cudurka Sambabka oo laga tallaalayo laba milyan oo Ari ah